W003 Wireless xeedho for Iphone X iyo Apple Watch. - Shiinaha Shenzhen Macverin Electronics
W003 Wireless xeedho for Iphone X iyo Apple Watch.
MACVERIN W-003, taas oo la dusha dhalooyinka iyo daawaha Aluminum cover hoose. Waxa ay ansixiyeen Heerka xukun wireless ah WPC-Qi1.2 iyo Apple daawado maamuuska i-Watch. Waxaa haboon xukun wireless ah telefoonada gacanta, digital, isgaarsiinta, GPRS, gaari, alaabta guriga, ka hortagga dabka iyo waxyaabaha biyuhu waa. Waxaa loo isticmaalaa in xukun wireless batari ama korontada wireless. Support for ugu dambeeyey ee Apple iyo Samsung telefoonada gacanta mobile xeedho wireless phone xukun specifications.Non-degdeg ah oo keliya u shaqeeyaan w ...
MACVERIN W-003, taas oo la dusha dhalooyinka iyo daawaha Aluminum cover hoose. Waxa ay ansixiyeen Heerka xukun wireless ah WPC-Qi1.2 iyo Apple daawado maamuuska i-Watch. Waxaa haboon xukun wireless ah telefoonada gacanta, digital, isgaarsiinta, GPRS, gaari, alaabta guriga, ka hortagga dabka iyo waxyaabaha biyuhu waa. Waxaa loo isticmaalaa in xukun wireless batari ama korontada wireless. Support for ugu dambeeyey ee Apple iyo Samsung telefoonada gacanta mobile xeedho wireless phone xukun specifications.Non-degdeg ah oo keliya mode QI 5W shaqeeyaan.
Model No. W-003 Type: Fast ka faaiidaysta 2 in 1 wireless suufka xeedho
Astaanta: MACVERIN Body Qalabka: Aluminum Daawaha hoose jiifku iyo galaas dusha sare.
Iyo meesha Asal ahaan: Colors Shiinaha: madow
damaanad: Shahaado 1 sano: CE, FCC, ROHS
110mm Round dhexroor, 10.6mm dhumucdiisuna, miisaanka Net: 271.5g; Cable dhererka: 1 M, od Width: 3mm;
Taageerada Apple iyo Samsung phone smart xukun wireless, 7.5W for Iphone iyo 10W for hawlaha Samsung halka la QC2.0 iyo QC3.0 saxan oo ansixiyay la QC caadiga ah hab maamuuska xira.
Previous: Macverin C002 Dual hillaac Splitter for iPhone
Next: U36 Nooca C lab in USB iyo LAN adabtarada dhaddig
Best Wireless Phone xeedho
Cheap Wireless xeedho
Function Multi Wireless xeedho
Qamaan Fast Wireless xeedho
Qamaan Standard Wireless xeedho
Qamaan wireless xeedho Waayo, Iphone
Universal Wireless xeedho
Wireless xeedho Fast
Wireless xeedho oogidda Fast
Wireless xeedho Waayo, Iphone
Wireless xeedho Waayo Iphone X
Wireless xeedho Waayo, Samsung S3
Wireless xeedho suufka
Wireless ka faaiidaysta suufka
Xeedho Fast Wireless
Wireless Mobile xeedho
Wireless Mobile Phone xeedho
Wireless Phone xeedho
8-in-1 USB C Hub Multi Port NOOCA C adabtarada ahaayeen ...
multiport USB nooca displayport xarun c HDMI waayo m ...
U36 Nooca C lab in USB iyo LAN adabtarada dhaddig
Macverin UD303 USB C inay DP 4K * Hub 60HZ 2k